China Oiri flling muchina mutsara fekitari uye bhizimisi | Higee
Iyi yekuzadza muchina mutsetse ndeyekuzadza yakakwira viscosity mvura kana zvinhu zvakaita semafuta, jamu etc.Iyi mutsara wekuzadza mutsara, uyo unogona kuve unosanganisirwa netafura yekudyisa, muchina wekuzadza, wekutapa muchina, wedhinda dhindaini, yekunyorera muchina seimwe tambo izere.
Oiri Kuzadza Capping Machine Linear Line
1.Automatic Oiri Kuzadza Machine
Oiri, kirimu, jamu, sipo, uye zvimwe zvine viscous zvinhu muchinwiwa, chikafu, kemikari, mishonga yekuuraya zvipuka, zvekurapa, zvigadzirwa, uye mamwe maindasitiri mazhinji.
● Rakarurama Vhoriyamu: Servo sisitimu inoiswa simbisa iyo chaiyo kurongeka kweiyo yekuzadza vhoriyamu.
● Chinja Chinochinjika: Iyo yekumhanyisa kumhanyisa inozoita inononoka otomatiki kana uchisvika padanho rakatarwa.
● Kunyudza Kuzadza: Kuzadza mabhuti kunonyudza mukati memvura uchizadza kudzivirira kupupuma furo uye kurasira.
● Kugadziridza kweUngwaru: Iwe unongoda chete kuchinja ma parameter pane yekubata skrini kune akasiyana ekuzadza vhoriyamu kana kunyatso kugadzirisa. Misoro yese yekuzadza inogona kugadziriswa. Iyo ine mushandisi-inoshamwaridzika interface uye iri nyore chaizvo kushandisa.
● Kusvibisa-isina: Iyo huru furemu yemuchina inogadzirwa yemhando yepamusoro simbi isina chinhu 304 ine yakanaka inopesana nekukanganisa maitiro. Zvese zvinosangana zvikamu zvakagadzirwa nesimbi isina tsvina 316L. Mushini wese wakavharwa nesimbi isina girazi uye girazi rakabatiswa kuitira kuti tsvina yegasi idonhe ichadzivirirwa.
2.Automatic Kumonyanisa Capping Machine
Mhando iyi yemuchina wekutapa unoshandiswa zvakanyanya pakutapa kweakapoterera, akaenzana, kana mabhodhoro akapfava ane sikuruu chivharo.
3.Automatic Sticker Kunyora Muchina
Rudzi urwu rwekunyora muchina unoshandiswa zvakanyanya kunyorwa kwemabhodhoro akatenderera aine anonamira. Iyo inodzorwa nePLC uye inotyairwa neservo. Iyo yekushandisa-inoshamwaridzika interface inoita kuti zvive nyore kushandisa.
1. Iyo yakazvimirira electromechanical chitaridzi rolling mamiriro inowirirana iyo inotenderera uye yekunyorera maitiro, nokudaro ichivandudza iyo yekunyorera kunyatso.
2. Pane kuraira pamushini unoratidza mashandisiro anoita iyo firimu chitaridzi kuti kuchinja firimu kuve nyore.
Pashure: Pasteurizer & Sterilizer
Zvadaro: Yakakosha mafuta yekuzadza muchina mutsara
Oiri Kuzadza Muchina